‘इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ मा भारतको एकाधिकार अन्त्य - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
पुष २७, २०७४ 1468
पेट्रोलियम, विद्युत् तथा खाद्यवस्तुसहित ‘इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ (इन्टरनेट प्रयोग) मा समेत वर्षौंदेखि भारतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगमा आएसँगै नेपालमा भारतको एकाधिकार अन्त्य हुनेछ ।
नेपाल टेलिकमले भोलि (शुक्रबार) देखि चीनको ‘इन्टरनेट ब्याण्डविथ’ प्रयोगमा ल्याउँदैछ । यसअघि इन्टरनेट प्रयोग गर्न भारतमै निर्भर हुनुपरेको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले शुक्रबार ‘नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीच क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक’ को औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
‘इन्टरनेट प्रयोग गर्न नेपाल–भारत अप्टिकल फाइबरबाट जोडिएको थियो, भोलिदेखि चीनसँग पनि जोडिनेछ,’ टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले भनिन्, ‘यसले हाम्रो सेवामा गुणस्तर कायम गर्नेछ ।’ देशमा बढ्दै गएको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको माग यसले सजिलै पूरा गर्ने उनले बताइन् ।
चिनियाँ इन्टरनेट ब्याण्डविथ क्षमता (भोल्युम) बारे भने टेलिकमले खुलाएको छैन । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा ब्याण्डविथ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा टेलिकम र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।
नेपालले चिनियाँ इन्टरनेट रसुवागढी ‘गेट वे’ बाट प्राप्त गर्नेछ । नेपाल अहिले भारतका विभिन्न टेलिकम अपरेटरमार्फत विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्जलगायत गेट वे बाट विश्व इन्टरनेटसँग जोडिएको छ ।